မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: My First Wedding Emcee Experience
Posted by mabaydar at 10:31 AM
ဖတ်နေရင်း ရင်မောလိုက်တာ... ဘာများအမှားဖြစ်မလဲလို့.. :P နောက်ဆုံးချောချောမောမောနဲ့ ပြီးသွားမှ သက်ပြင်းချနိုင်တယ်... စိတ်လှုပ်ရှားအောင် ရေးနိုင်တဲ့သူ.....
kyaw kyaw lin said...
့ရှန်ပိန် လေးတော့သောက်တတ်အောင်လုပ်ထားမပေါ့ဗျ .... :D ဟီဟီ photo ထဲမှာတော့တော်တော် ရုန်းကန် လိုက်ရတဲ့ပုံဘဲ ...
အဲဒီနေ့က ပြောသွားတာ အားလုံးကောင်းပါတယ်.. နောက်ကွယ်ကဖြစ်ရပ်လေးတွေတော့ ခုမှသိရတာပေါ့လေ..း)
မြူးမြူးက PMZ လားမသိဘူး... မဟုတ်ဘူးဆိုရင် အဲဒိနေ့က ဘာအကျီင်္ဝတ်ထားလဲမသိဘူး... အားလုံးနဲ့ စကားပြောမိတ်ဆက် ဓာတ်ပုံတွဲရိုက်ချင်တာ... မရိုက်ဖြစ်ခဲ့ဘူး...
Minn Yoon said...
ရှနျ​ပိနျ သောကျ​နေ​တဲ့​ပုံစံ​က ရီ​ရ​တယျ​ဟ.. ဘာ​ပဲ​ပွော​ပွော အဲ့​ဒိ အင်ျကြီ​လေး​နဲ့​တော့ နငျ​နဲ့တျောတျော လိုကျ​တယျ ထငျ​တာ​ပဲ။ လှ​တယျ.. :)
2/25/2011 1:00 PM
2/25/2011 2:13 PM
မြူးမြူးက PMZ ပါ..အဲဒီနေ့က ဒါ့ပုံရိုက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် မဗေဒါရဲ့.. :)
မမ ၀၀လေးပါ မေလေးရယ်.. :)
2/25/2011 2:48 PM
မှိန်ထားပေမယ့် ဒီသတို့သားပုံက မှားစရာ မရှိပါဘူး။ :D
2/25/2011 3:28 PM
၀ိတ်ချထားတာလား။ ပိန်သွားသလိုပဲနော်။ အရမ်းလှနေတယ် မဗေဒါက။ ဖတ်လို့လဲကောင်းတယ်။ ကျေးဇူး။
2/25/2011 10:36 PM
ပထမဆုံးEmcee လုပ်တာ ဆိုပေမယ့် မဗေဒါ ပြောဆိုတာ လုပ်ကိုင်တာတွေက အစီအစဉ်ကျပါတယ်။ smart လည်းကျတယ်။
ငါလည်း အဲဒီနေ့ကမှ မင်္ဂလာဆောင် ဓါတ်ပုံစရိုက်ဖူးတာပဲ။
ရှန်ပိန် တစ်စက်သောက်ထားတဲ့ပုံမှာ ကျန်တဲ့သူတွေကို ၀ါးထားလိုက်တာ ငါတောင်မျက်စိလယ်သွားတယ်။ အဲလိုလုပ်ပေးထားတာ မှန်ပါတယ်။
စကားမစပ် နာမည်ကျော် ဘလော့ဂါကြီး ဆိုပြီးတော့ နာမည်မတပ်ပါနဲ့ကွယ်။ ခုက စာလည်း အသစ်မရေးဖြစ်တော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင် ဘလော့ဂါ နာမည်ခံရမှာ စိတ်မလုံဘူး။ :)
2/26/2011 12:08 AM
ညီမ မဗေဒါလေးက ချစ်စရာသိပ်ကောင်းတာဘဲ
ကြော့ရှင်း စမတ်ကျနေတာ တွေ့ရတော့ ၀မ်းသာမိတယ်။
စာရေးကောင်းသလို စကားပြောလဲကောင်းမှာပါ။ နောက်ပွဲတွေမှာလည်း Emcee ချောချော ကောင်းကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်လာဦးတော့မှာပါ။ ပွင့်လင်းတဲ့ စာရေးဟန်လေးတွေကို သဘောကျမိတယ်.
ခုမှဖတ်ရတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ခဲ့ ဖြစ်ခဲ့ အားလုံးက အမှတ်တရပါပဲ။း) မဗေဒါနဲ့ ဘရာဇီးနဲ့ ၂ယောက်ပုံရှိတယ်။ ပို့လိုက်မယ်.. အဲ့ဒီ တဝိုင်းလုံးက နေခြည့်ရုံးက လူတွေပါ။ အားနာစရာမလိုပါဘူး။ ကူညီပေးတဲ့အတွက်တောင် ပြန်ကျေးဇူးတင်သေးတယ်။
Thanks for your support and help sis.
We started posting photos on FB already and only FB. :)
All finish perfect. :)
3/15/2011 10:07 PM